Sina 1.56 Aspherical Cr39 Tanjona fahitana fahitana AR Coating NK55 Fitaovana mpanamboatra sy fitaovana | Kingway
Ny fitaovana fampiasa matetika amin'ny solomaso dia vera sy resina mafy antsoina hoe CR-39. Miaraka amin'ny fanatsarana tsy tapaka ny teknolojia dia misy fepetra takiana bebe kokoa amin'ny solomaso CR39 (optika / plastika) noho ny solomaso fitaratra. Mpanamboatra solomaso optika izahay, ary ao anatin'ireto masom-borona ireto, ny masinina fanondroana 1.56 dia iray amin'ireo lantina malaza indrindra eran'izao tontolo izao. Ankoatr'izay, ny solomaso misy index 1,56 dia heverina ho masonkarena mahomby indrindra amin'ny tsena manerantany.
hateviny:Eo ambanin'ireto taratasim-panafody ireto ihany, 1.56 ny lantom-panondro misy index dia manify kokoa noho ny lens an'ny 1.499. satria ny fitomboan'ny diopters dia hitombo ny fahasamihafana. Raha atao teny hafa, ireo fitaovana avo lenta dia sokajina isa. Averina indray, ny index ambony kokoa, ny manify sy maivana kokoa ny solomaso.
Weight: Noho ny hateviny dia miharihary fa 1.56 ny masomandy maivana kokoa noho ny 1,199 lantiraka amin'ny diopters iray ihany.
Previous: Semi Finished 1,499 Index Lensa famolavolana eyiglass top 28 segment
Manaraka: 1.61 Optical Cr39 Tanjona fahitana fahitana MR-8 Monomer ASP UV400 HMC Coating